Animation – Yourcinema
Next Gen A friendship withatop-secret robot turnsalonely girl's life intoathrilling adventure as they take on bullies, evil bots andascheming madman. -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= Translated Wutt Yee Encoded By Kar Yan
IMDB: 6.6/10 13,020 votes
The Stolen Princess: Ruslan and Ludmila အချစ်မှာ ဘယ်လောက်ထိကြီးမားတဲ့ စွမ်းအားတွေရှိပါသလဲ? ‌မှော်ဆရာကြီး Chernomor ကတော့ သူ့ရဲ့အဓိကစွမ်းအားတွေကို အချစ်ရဲ့စွမ်းအားကနေ ရယူတာပါတဲ့။ သူဟာ အစဉ်အဆက် တိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့ အချစ်နဲ့တွေ့ကြုံပြီးတဲ့ မင်းသမီးလေးတွေကို ဖမ်းခေါ်၊ ကျောက်ရုပ်အဖြစ်ပြောင်းပြီး အချစ်ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုရယူနေခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်နေ့ကျ Ruslan ဆိုတဲ့ လမ်းဘေးပြဇာတ်သမားလေးတစ်ယောက်နဲ့ Mila ဆိုတဲ့ မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်တို့ရဲ့ အချစ်စွမ်းအားကို ထိပါးလာတဲ့ အခါမှာတော့... Ruslan ရဲ့ ချစ်ရတဲ့မင်းသမီးလေး Milaကို မှော်ဆရာကြီး Chernomor လက်ထဲကနေ ပြန်လည်ကယ်တင်ပုံတွေကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး တင်ဆက်သွားတဲ့ animation ကောင်းတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ IMDb rating က 6.1/10 ပါ။ မနှစ်က (2019) Children KinoFest မှာ Grand prize [Winner] ဖြစ်တဲ့ Best Film ဆုကိုလည်း ရရှိထားပါတယ်။ ဇာတ်ဝင်တေးလေးတွေလည်း ကောင်းပါတယ်။ Thriller တွေ Drama တွေ နဲ့ပဲ ထိတွေ့နေရလို့ စိတ်တွေ ...
IMDB: 6.1/10 1,891 votes
Robots Pageကနေ Movie တွေကြီးပဲကြည့်နေရတာပျင်းလာလို့ Animation ကောင်းကောင်းလေးကြည့်ချင်သူတွေအတွက် Robots ဆိုတဲ့ animation movie လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Robots ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးဟာ Well-E မထွက်ခင် 2005 ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ စက်ရုပ် ကမ္ဘာအကြောင်းကို စိတ်ကူးယဥ်ပုံဖော်ထားတဲ့ဇာတ်ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီ Animation movie က IMDb 6.3/10 ရရှိခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မိသားစုဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ကလေးတွေကိုအိမ်မက်ကိုယ်စီထားရှိဖို့ လက်မလျှော့တတ်စေဖို့ ပညာပေးထားတဲ့ ကားလဲဖြစ်သလို comedy ဆန်ဆန်အခန်းတွေလည်းပါဝင်တာကြောင့်ရယ်ရယ်မောမောကြည့်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်ကားအကျဥ်းပြောရလျှင် Rodney ဆိုတဲ့ စက်ရုပ်ကလေးက တီထွင်ဖန်တီးရတာဝါသနာပါပြီး ငယ်ငယ်လေးကတည်း စက်ရုပ်လေးတွေကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့အိမ်မက်ကတော့ တစ်နေ့စက်ရုပ်မြို့တော်ဆီသွားပြီး Bigweld ဆိုတဲ့ စက်ရုပ်ကြီးလို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးတီထွင်သူဖြစ်ချင်တာပါ။ အဲ့တာမို့လို့ သူအရွယ်ရောက်လာတဲ့တစ်နေ့ စက်ရုပ်မြို့တော်ဆီသွားပြီး Bigweld ဆိုသူရှာသောလည်း စက်ရုံမြို့တော်မှာ သူစိတ်ကူးထားတာနဲ့ မတူသောအခါ Bigweld ကိုရှာတွေ့သော်လည်း သူထင်သလိုမဟုတ်သောအခါ သူကိုယ်တိုင်စက်ရုပ်မြို့တော်ကိုပြောင်းလဲဖို့ ကံကြမ္မာဖန်လာသောအခါ ဘယ်လိုကြိုးစားမယ်ဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားစွာကြည့်ရှုရမဲ့ Animation movie လေးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။ အညွန်းနှင့် ဘာသာပြန် သူကတော့နော်ဆူးဖောရှီး ဖြစ်ပြီး ကာရံမှတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်
IMDB: 6.3/10 129,030 votes
Frankenweenie သင်ဟာ Animationဖန်တစ်ယောက်ဆိုရင် ဒီဇာတ်ကားကားလေးကိုကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်သင့်တယ် ဒီကားလေးက သိပ္ပံပညာကိုအခြေခံရိုက်ထားတာဖြစ်ပြီး သည်းထိတ်ရင်ဖိုတွေပါမယ် စွန့်စားခန်းတွေလည်းပါမယ် ဟာသလည်းပါးပါးလေးပုတ်ထားတယ်.... ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဗစ်တာဆိုတဲ့လူငယ်လေးက သူ့ခွေးလေးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတယ် ဒါပေမယ့် ဗစ်တာအတွက်တော့ သူဟာခွေးတစ်ကောင်မဟုတ်ခဲ့ဘူး .... ဗစ်တာအတွက်တစ်ဦးတည်းသောသူငယ်ချင်း... အခင်မင်ဆုံးမိတ်ဆွေ.... ကိုယ်အရမ်းချစ်တဲ့သူကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရရင် ပြန်ရဖို့အတွက် ဘာမဆိုလုပ်မယ့် လူတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်း ဗစ်တာကသူ့ခွေးလေးကို အသက်ပြန်သွင်းဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုနဲ့ကြိုးစားခဲ့တယ် ပြီးတော့အောင်မြင်ခဲ့တယ်ပေါ့.... ဒါကိုသိတဲ့သူ့ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အဲ့နည်းလမ်းကိုလုပ်ကြည့်ချင်ကြကော.... တချို့ကကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့သိပ္ပံပြိုင်ပွဲအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးလုပ်ချင်တယ် တချို့ကကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေကို ပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်လုပ်ချင်တယ်... လုပ်လည်းလုပ်ကြတော့ သူတို့လည်းအောင်မြင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ ဒါပေမယ့်........ ဗစ်တာတုန်းကလိုမဟုတ်ပဲ ဘယ်သူမှမထင်ထားတဲ့ အလွဲအမှားကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ် ဘယ်လိုအလွဲအမှားကြီးလဲ ?????? .....အဖြူအမဲနောက်ခံနဲ့ရိုက်ထားတာက ဇာတ်လမ်းကိုပိုလေးနက်စေသလို သိပ္ပံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေလည်းရနိုင်တဲ့အတွက် ဒီဇာတ်ကားလေးကိုကြည့်ရှုဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ဗျာ..... Translated & Review By Triyan Encoded By Kar Yan
IMDB: 6.9/10 94,201 votes
Spies in Disguise (2019) ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံး စပိုင်တယောက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားခြင်း ခံရတဲ့ Lance Sterling နဲ့ သိပ္ပံပညာရှင် လူငယ်လေး Walter Beckett တို့ရဲ့ ခံယူချက်ကတော့ ပြသားတလမ်း သံတလမ်းစီပါ ဘယ် mission မဆို 100 percent အောင်မြင်အောင်လုပ်တက်ပြီး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမှာ မကောင်းတဲ့ Lance တယောက် mission ထမ်းဆောင်ရင်နဲ့ အမှားလေးနည်းနည်းပါရှိသွားတဲ့ အတွက်ကြောင့် နေ့ခြင်း ညခြင်းကို ပဲ wanted person ဖြစ်သွားပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့် သူကြုံနေတော့ အခက်အခဲကနေ လွတ်မြောက်အောင် ကိုယ်ဖျောက်ပြီး ပြသနာကို ဖြေရှင်းဖို့ Walter ရဲ့ အိမ်ကို ရောက်သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ Walter တီထွင်ထားတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းတဲ့ ဆေးရည်ကို သောက်ပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်း super spy ကြီးတယောက် ခိုတကောင်အဖြစ် ဘဝပြောင်းသွားပါတယ် Super spy ကြီးကို လို ဘဝကနေလည်းပြောင်းအောင် ...
IMDB: 6.8/10 20349 votes